भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणाबाट क्यान्सर अस्पतालमा आशाको सञ्चार « Janata Samachar
#नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
#जनता समाचार डटकम
#जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनो
भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणाबाट क्यान्सर अस्पतालमा आशाको सञ्चार
प्रकाशित मिति : 16 May, 2018 6:44 pm
भक्तपुर । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट नेपाल भ्रमणका बेला भक्तपुर दूधपाटीस्थित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई भाभाट्रोन रेडियो थेरापी उपकरण दिने घोषणा भएसँगै अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीलाई सहजरुपमा गुणस्तरीय रेडियो थेरापी सेवा दिन सकिने आशा पलाएको छ ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट क्यान्सर बिरामीको उपचारमा सहयोग हुने अत्याधुनिक भाभाट्रोन रेडियो थेरापी उपकरण (कोबाल्ट ६० विथ सिमुलेटर) दिने घोषणा भएसँगै क्यान्सर बिरामीलाई अब सहजरुपमा सेवा दिन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेसँगै यो मेशिन जतिसक्दो छिटो आउँला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । यो मेशिन आएपछि रेडियो थेरापीमा अझै गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नेछाँै ।” करीब रु १० करोड पर्ने यो मेशिन आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेको २० वर्ष पुरानो रेडियो थेरापी मेशिनलाई हट्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विसं २०५५ मा रोटरी क्लब अफ युकेलगायतको सहयोगमा अस्पताललाई प्राप्त साइरस रेडियो थेरापी कोबाल्ट मेशिनले हालसम्म सेवा दिँदै आए पनि पुरानो भएकाले पछिल्लो समयमा अपेक्षित सेवा दिन सकिएको छैन ।
अस्पतालले नेपाल सरकारको अनुदानमा अत्याधुनिक रेडियो थेरापी लिनायक मेशिन पनि ल्याउने भएको छ । करीब रु १९ करोड पर्ने यो मेशिन आगामी छ महिनाभित्र नेपाल ल्याएर सञ्चालन गर्ने तयारीमा अस्पताल रहेको कार्यकारी निर्देशक डा श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसका लागि नेपाल सरकारले रु पाँच करोड अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ ।
भारत सरकारले प्रदान गर्ने मेशिन र नेपाल सरकारको अनुदानमा ल्याउन लागिएको अत्याधुनिक लिनायक मेशिन सञ्चालन भएपछि भने रेडियो थेरापी गर्नुपर्ने बिरामीले पालो कुर्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अस्पतालका प्रशासन प्रमुख राजाराम तजलेले हाल रेडियो थेरापीको सेवा लिन क्यान्सरका बिरामीले दुई महिना कुर्दै पर्ने वाध्यता रहेको बताउनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरेको मेशिन आएलगत्तै बिरामीले छिटो र सहजरुपमा सेवा दिन सकिने बताइन्छ ।
प्रशासन प्रमुख तजलेले भन्नुभयो, “पुरानो मेशिनबाट हाल दैनिक १०० देखि ११५ जनासम्मको थेरापी हुँदै आएको छ । अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको मेशिन आएर सञ्चालन भएलगत्तै रेडियो थेरापी गर्ने बिरामीले सजिलो र अझै गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नेछौँ ।”
भारतले दिने मेशिन र लिनायक मेशिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिए दैनिक २०० भन्दा बढी बिरामीको रेडियो थेरापी गर्न सकिने बताइन्छ । यस्तो भएमा क्यान्सरका बिरामी थेरापीका लागि पालो कुर्नुपर्ने समस्याबाट भने मुक्त हुनेछन् ।
अस्पतालले यसअघि नै भारतीय राजदूतावासमार्फत रेडियो थेरापी मेशिन सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुरोधस्वरुप नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मेशिन भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
अस्पताल प्रशासनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणाले अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी र बिरामीमा नयाँ आशा र खुशी पलाएको जनाएको छ ।
हाल ओपिडी, फलोअप र रेडियो थेरापीलगायतको सेवा लिन अस्पतालमा दैनिक ४५० जनाभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् ।
प्रसूति, नाक, कान, घाँटी, पेट, हाडजोर्नीलगायत विभिन्न रोगको दैनिक छ वटासम्म शल्यक्रिया गर्दै आएको यस अस्पतालमा बिरामीको चापको अनुपातमा यन्त्र उपकरणको अभाव रहँदैआएको छ ।
यसअघि पनि भारतीय दूतावासले नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका विभिन्न शाखाका लागि एम्बुलेन्स, जेनेरेटर उपहार दिएको थियो भने अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका गरीब, असहाय बच्चा तथा महिलाका लागि इन्डियन ओमन क्लबबाट प्रत्येक वर्ष एक लाख ५० हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइँदै आइएको छ ।
उपचार गर्दागर्दै बिरामीको मृत्यु, अस्पताल तनावग्रस्त
काठमाडौं । बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ । राजविराजको गजेन्द्रनारायण
सावधान ! गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
काठमाडौं । असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि गर्भनिरोधक चक्की खानेको संख्या बढेको छ । युवतीदेखि विवाहित महिलाहरुले
एक लाख स्वास्थ्य व्यवसायी आन्दोलित
काठमाडौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै एक लाख स्वास्थ्य व्यवसायी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
एउटै औषधिको मूल्य आठ गुणा बढी !
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको उचित मूल्य निर्धारण नगर्दा आठ गुणासम्म बढी मूल्य तिर्न
जनता टेलिभिजनमा आज
बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी–राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन–प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० दर्शन दिग्दर्शन ६ः५५…
२०७५ माघ ३ गतेको राशिफल
मेषः वाणीको प्रभाव पर्नेछ, कुटुम्ब वृद्धि हुनेछ । वृषः जिम्मेवारी थपिनेछ । राम्रो अवसर आउनेछ । मिथुनः यात्रामा सास्ती हुनेछ…
ड्युटीमा रहेका हवल्दारमाथि गोली प्रहार
सप्तरी । खडक नागरपालिका, बोदे बरसाइन सडक खण्डमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी हवल्दारलाई अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको छ । प्रहरी…
भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण भएको सरकारी…
सरस्वती तामाङ काठमाडौं । २०५५ सालदेखि मनाउन थालिएको भूकम्प सुरक्षा दिवस, यसपटक पनि देशभर मनाइएको छ । सरकारी पहलमै भूकम्पबारे…
धरातलविरुद्धका बहसमा अल्झिएको देश
देशको अर्थतन्त्रका विरुद्ध अनेकन षडयन्त्र भैरहेका छन्, सस्तो लोकप्रियताको आडमा । यसबाट सरकार र नागरिक समाज सबै सतर्क हुन जरुरी…
कर्मचारीका घर ठडिए भूकम्प पीडितको हालत…
अस्मिता रिजाल काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा धेरै परिवर्तन भए । बिशेषगरी संरचना पुनर्निर्माणले समाजमा परिवर्तनको महसुस त गरायो…
अप्रेशन कक्षमा डाक्टर र नर्सः अवस्था यस्तो छ ! भिडियो…
सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरतलाई नेपाल प्रहरी र सेनामा !
पाँचतारे होटलमा हजारौंको खाना सित्तैमा, बाबुछोरा समातिए
माघ २ गते(भोलि) सार्वजनिक बिदा
निर्मलाका बुवा यज्ञराजले रगत नदिनुको आयो रहस्य !
सलमानको दायाँ हातमा पहिरिएको ब्रासलेटको मूल्य कति ?
सामाजिक सञ्जालमा ‘टुटल क्रेज’
समायोजनमा जाने कर्मचारीको लर्को !
नेकपाको विधान परिमार्जन गर्ने सहमति
चरेससहित ‘डान्सर’ कान्छी माया पक्राउ
‘इन्टरनेटको मूल्य बढ्छ’
उपसचिवले वृद्ध कुटे
नयाँ हवाई रुट दिन भारत तयार
सम्पादक: रामकुमार एलन
कार्यकारी सम्पादक: युव बहादुर गाहा मगर
सह–सम्पादक: तीर्थ न्यौपाने
सह–सम्पादक: खेम बम
संवाददाता: पुष्पा बुढाथोकी
© 2019 Janata Samachar